Umgaqo-nkqubo weVisa waseIndiya ubuyela kwiVisa yabakhenkethi
Umgaqo-nkqubo weVisa waseIndiya uza kubuyelana
Isicelo seVisa saseIndiya ngoku iyafumaneka kubo bonke abantu basemzini kwi-intanethi. Urhulumente waseIndiya ivuliwe ngoku I-Visa yezonyango yaseIndiya kwaye I-Visa yeshishini laseNdiya, iVisa yeToursit evaliweyo ngenxa ye IPHEPHA 19 ikwikona ekufuneka ivulwe.
Nangona kunjalo, i Urhulumente waseIndiya ngoku ithatha inyathelo elitsha kuMgaqo-nkqubo wayo wokuFudukela kunye neVisa. Unyango, umgaqo-nkqubo, ubude bexesha, amaxabiso kunye nezinye izinto ziya kutshintshwa ngokusekwe kwindlela amanye amazwe awaphatha ngayo amaIndiya afaka isicelo seVisa kwamanye amazwe.
Olu lungelelwaniso luya kwenzelwa I-Visa yabakhenkethi yaseIndiya.
Isatifikethi sokugonya seVisa yabakhenkethi baseIndiya
Urhulumente waseIndiya ikwaqwalasela incwadana yokundwendwela yesitofu sokugonya, oko kukuthi, ukuvumela abo bangene eIndiya ngokukhululekileyo, abawagqibileyo omabini amayeza okugonya. Lo bhubhani uliphakamisile ishishini lokhenketho eIndiya kwaye ngoku iSebe leMicimbi yezeKhaya lizimisele ukuvula ilizwe. I-Ofisi yoMphathiswa ikwaqwalasela ukubekelwa bucala emakhaya kubatyeleli abangenalo isitofu sokugonya.
IVisa yaseIndiya ngoku ifunwa ngabakhenkethi abafuna ukuhamba Iindawo zeLifa leMveli eIndiya, emhlabeni Isigidi esi-1 sabakhenkethi bebendwendwela eIndiya nyanga nganye ngaphambi kobhubhane.
Abemi bamazwe amaninzi kubandakanya iUnited States, iCanada, iFransi, iNew Zealand, iOstreliya, iJamani, iSweden, iDenmark, iSwitzerland, i-Itali, iSingapore, iUnited Kingdom, bafanelekile kwiVisa yaseIndiya kwi-Intanethi (I-eVisa India) kubandakanya ukutyelela iilwandle zaseIndiya kwi-visa yabakhenkethi. Umhlali wamazwe angaphezulu kwe-180 ekumgangatho we-Visa yaseIndiya ekwi-Intanethi (eVisa yaseIndiya) ngokokuLungeka kweVisa yaseIndiya kwaye usebenzise iVisa yaseIndiya ekwi-Intanethi enikezelwa nguRhulumente waseIndiya.
Ngaba unawo nawaphi na amathandabuzo okanye ufuna uncedo kuhambo lwakho oluya eIndiya okanye iVisa yaseIndiya (I-eVisa India), ungafaka isicelo se Indian Visa ekwi-Intanethi apha kwaye ukuba ufuna naluphi na uncedo okanye ufuna ingcaciso kufuneka uqhagamshelane nayo IDesika yoNcedo lweVisa yaseIndiya ngenkxaso kunye nesikhokelo.